स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम नुस्खा Thermomix को साथ बनाईएको ThermoRecines
पहिलो पहिलो आईपुग्ने बित्तिकै, म आइसक्रीमबाट सुरु गर्छु, कस्तो स्वादिष्ट! आज हामी एक स्वादिष्ट खाना कसरी तयार गर्ने सिक्नेछौं Thermomix® को साथ स्ट्रबेरी आइसक्रीम.
लगभग सबै जस्तै बच्चाहरुमेरा छोरीहरू उनीहरू सबैलाई मन पराउँछन् र सप्ताहन्तमा उनीहरूले मलाई सोध्ने मिठाई हो। Thermomix® को साथ तिनीहरू महान बाहिर आउँदछन्, तिनीहरू बनाउन सजिलो हुन्छ र सबै भन्दा माथि, महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि तिनीहरू प्राकृतिक छन् र हामी नियन्त्रण गर्छौं कि सबै तत्वहरू गुणस्तरीय छन्।
मैले गर्न पहिलो कुरा हो चिनी उल्टाउनुहोस्, जसले आइसक्रिमलाई क्रिस्टलीकरण नगर्न मद्दत गर्दछ जब हामी यसलाई स्थिर गर्छौं, त्यो यो रहन्छ क्रीमियर र आइस चिप्सको साथ होईन। थप रूपमा, यो फैलिन्छ र कोठाको तापमानमा लामो समयसम्म रहन्छ, त्यसैले हामीले धेरै बरफका क्रीमहरू बनाउनु पर्छ।
स्ट्रबेरी मौसम समाप्त हुनुभन्दा पहिले म सँधै किनमेल गर्छु तिनीहरूलाई स्थिर गर्नुहोस्। पहिले म तिनीहरूलाई धुन्छु, पातहरू हटाउँछु, टुक्रा-टुक्रा बनाउँछु र झोलामा राख्छु। यस तरीकाले म निश्चित गर्दछ कि मसँग तिनीहरूसँग कुनै अवसरमा यो आइसक्रिम बनाउनको लागि तयार छ।
ताजा बनाईएको, स्ट्रबेरी आइसक्रीम धेरै क्रीमदार र हो नरम तर यदि तपाईं यो पहिले नै गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं यसलाई बाहिर लैजान सक्नुहुन्छ र प्रगतिशील गति few- beat-१० मा केहि सेकेन्डको लागि फेरि हराउन सक्नुहुन्छ ताकि बरफ क्रिस्टलहरू भाँचिए र यसलाई फेरि मलाई क्रीमी बनाए। यदि तपाईं यसलाई फेरि पीच्न चाहनुहुन्न भने, तपाईं यसलाई सेवामा before० मिनेट लिन सक्नुहुनेछ ताकि यो अलि पग्लिहाल्छ ... यो उत्तम हुनेछ!
1 स्ट्रबेरी आइसक्रीम
तपाईं घरमा फ्रिज स्ट्र स्ट्रबेरीको फाइदा लिनको लागि एउटा उत्तम विचार।
Sugar० ग्राम चिनी (वा १०० ग्राम यदि हामी इन्भर्ट चिनी थप्दैनौं)
उल्टो चिनी को g० g (नुस्खा हेर्नुहोस्) यहाँ)
G०० ग्राम फ्रिज गरिएको काटिएको स्ट्रबेरी
300 g कोरिंग क्रीम, धेरै चिसो
हामीले सेतो चिनीलाई गिलासमा राख्यौं र यसको बखत पल्भराइज गर्‍यौं २० सेकेन्ड, प्रगतिशील गति 20-5-१०।
स्थिर स्ट्रोबेरी थप्नुहोस् र ब्लेन्ड गर्नुहोस् २० सेकेन्ड, प्रगतिशील गति 30-5-१०।
गिलासको भित्तेहरूमा रहेका ब्लेडहरूतिर हामी बाँच्दछौं।
इन्भर्ट चिनी र धेरै चिसो क्रीम थप्नुहोस्। हामी प्रोग्राम १ मिनेट, गति 1 मा।
यदि हामीलाई क्रीमी मनपर्दछ भने, हामी तुरून्त सेवा गर्छौं।
अर्को विकल्प भनेको यसलाई ट्युपरवेयरमा खन्याउनु हो, यसलाई फ्रिजरमा राख्नुहोस् र अर्को रातको लागि राति छोड्नुहोस्। हामी यसलाई फ्रिजरबाट बाहिर निकाल्छौं र यसलाई फेरि थर्मोमिक्स गिलासमा राख्छौं। हामी समयमा कुचल्छौं Or वा seconds सेकेन्ड, प्रगतिशील गति 5-6-१० र हामी सेवा गर्छौं।
थप जानकारी - चिनी उल्टाउनुहोस्
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: Celiac, सजिलो, अण्डो असहिष्णु, १ 15 मिनेट भन्दा कम, Postres, गर्मी रेसिपी, बच्चाहरूको लागि व्यंजनहरु
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » थर्मोमिक्स रेसिपीहरू » Postres » स्ट्रबेरी आइसक्रीम
स्वादिष्ट !!!! सत्य यो हो कि तिनीहरू थर्मामिक्समा महान बाहिर आउँदछन्, मैले कहिल्यै आइसक्रिम बनाएको छैन, मैले सधैं शर्बत बनाएको छु ... तर यो पहिले नै चलिरहेको छ।
खुशी हुनुहोस्, पिलुका! यो धेरै स्वादिलो ​​छ। शुभकामना।
शुभ प्रभात, म यो नुस्खा बनाउन चाहान्छु, स्ट्रबेरी आइसक्रीम र मलाई थाहा छैन कि उल्टो चिनी के हो, के तपाई मलाई मदत गर्न सक्नुहुन्छ? धन्यवाद
नमस्ते मोन्टसे, उल्टो चिनीमा क्लिक गर्नुहोस् र यसले तपाईंलाई रेसिपीमा लैजान्छ, वा रेसिपी अनुक्रमणिका मार्फत तपाईंले यसलाई देख्न पनि सक्नुहुन्छ, हामीले यसलाई केही महिना अघि प्रकाशित गर्‍यौं। शुभकामना।
मैले लिंक राखें: http://www.thermorecetas.com/2010/09/27/Receta-Facil-Thermomix-Azucar-invertido-para-helados,-bizcochos,-… /
नमस्कार एलेना, सब भन्दा पहिले तपाईलाई बधाई छ तपाईको शानदार ब्लगमा रमाईलो छ। I
प्रत्येक दिन मसँग तपाईंको रेसिपीहरू छन् र म सधै तिनीहरूलाई पढ्छु।
एक प्रश्न, तपाइँ कसरी उल्टो चिनी गर्नुहुन्छ?
Meritxell लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते मेरिटक्सेल, उल्टो चिनीमा क्लिक गर्नुहोस् र यसले तपाईंलाई रेसिपीमा लैजान्छ, वा रेसिपी अनुक्रमणिका मार्फत तपाईंले यसलाई देख्न पनि सक्नुहुनेछ, हामीले यसलाई केही महिना अघि प्रकाशित गर्‍यौं। अभिवादन र हामीलाई हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यबाद।
एस्टर पेरेज भन्यो
धन्यवाद यस नुस्खाका लागि एलेना! अब म तपाइँसँग आइसक्रिम बनाउँदै छु र मेरो मोटो व्यक्तिले उनीहरूलाई माया गर्छ। मैले गरेको अन्तिम केरा हो।
केहि समय पहिले मैले तपाईको सल्लाह अनुसरण गर्दै उल्टो चिनी बनाएको छु र अब यो मेरो लागि ठूलो भएको छ!
हे, एउटा कुरा: के म स्याकरिनको लागि चिनी बदल्न सक्छु? मलाई भन्नुहोस् कि यदि मैले यसलाई उल्टो चिनीसँग मिलाउन सक्छु कि होइन किनभने यो मेरी सासू-ससुरा लागि जो मधुमेह हो।
एस्टर पेरेजलाई जवाफ दिनुहोस्
फेरि म तपाईंलाई सोध्न बिर्सें कि म क्रीमको सट्टामा वाष्पीकरण गरिएको दुध प्रयोग गर्न सक्छु। धन्यवाद।
नमस्ते एस्टर, मलाई त्यस्तै लाग्छ तर सत्य यो हो कि म सधैं व्यर्थको तरीकामा गर्दछु। यदि तपाईं प्रयास गर्नुहुन्छ भने मलाई कस्तो छ? शुभकामना।
हेलो एस्टर, उल्टो चिनी डायबेटिक व्यक्तिहरूले लिन सक्दैन, त्यसैले यदि तपाईंले इन्भर्ट चिनी थप्नुभयो भने तपाईंले साचारिन थप्न पर्वाह गर्नुहुन्न। अभिवादन र हामीलाई हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद!
मोनिका मतिन भन्यो
यो अविश्वसनीय छ !!
Micanica Matín लाई जवाफ दिनुहोस्
धेरै धेरै धन्यवाद, मोनिका!
सत्य यो हो कि यो धेरै राम्रो देखिन्छ।
यो धेरै स्वादिष्ट छ! अगाडि बढ्नुहोस् र यो प्रयास गर्नुहोस्, मिगुएल।
धन्यवाद एलेना, म तिमीलाई भेट्न जाँदैछु।
एक सानो चुम्बन
मैले अहिलेसम्म आइसक्रिम बनाउन हिम्मत गरिनँ, निस्सन्देह यो घरमा पहिलो घरको साथ मेरो ग्रीष्म beतु हो, तर त्यो दृश्यको साथ ... हामीले प्रयास गर्नुपर्नेछ।
खैर, हिजो हामीले तपाईंले प्रकाशित अन्तिम मासु खायौं, यो स्वादिष्ट छ।
मँ खुशी छु तपाईलाई यो मन पर्यो, मार्च!
यसलाई चकलेट र स्ट्रबेरीसँग बनाउनको लागि, म यो कसरी गर्न सक्छु? के यो चकलेट पिघलने र यसलाई जोड्ने वा मनपराउने हो?! के कसैले यो गर्न कोसिस गरेको छ ?! धेरै धेरै धन्यवाद
नमस्ते रोसियो, हामी चकलेट आइसक्रीमको लागि विधि तयार गर्दैछौं। हामी यसलाई केहि दिनमा प्रकाशित गर्नेछौं। शुभकामना।
धेरै धेरै धन्यबाद, म सजग रहनेछु कि मसँग चकलेट आइसक्रीम बनाउन सबै बाँकी छ! 😉
नमस्ते सिल्भिया, सेतो र निलो वा बैजनी ग्यासिफाइफालहरू के हुन्? र आइसक्रीम बनाउँदा वा ती सबै बनाउँदा के तपाईंले ती मध्ये एक लिनुपर्दछ? तपाईका व्यंजनहरु को लागी धेरै धन्यबाद। Vigo बाट Bicos।
नमस्ते चेलो, तिनीहरू खामहरू हुन् जसलाई "Gasificante" वा "सोडा" भनिन्छ र यो दुई-दुई आउँछ। तपाईंले दुईवटा खामहरू सँगै राख्नु पर्छ, एउटा सेतो र अर्को नीलो वा बैजनी (रङ ब्रान्डमा निर्भर गर्दछ)। हामीलाई देख्नु भएकोमा नमस्कार र धेरै धेरै धन्यवाद।
नमस्कार, म उल्टो चिनी र तरल कारमेल बनाउन चाहन्छु जुन मलाई ठूलो लाग्छ विशेष गरी यो प्राकृतिक हो र यसले कोलोरन्ट वा संरक्षक समावेश गर्दैन, जुन किन्ने कारमेलमा पर्याप्त मात्रामा छ। म जान्न चाहान्छु किन खनिज पानी उल्टो चिनीमा प्रयोग गरिन्छ ... थर्मोमिक्समा पुग्ने तापक्रमको साथ पर्याप्त छैन, म नलबाट पानी राख्न सक्छु? धन्यबाद, म धेरै जिज्ञासु छु र म सबै कुरा जान्न चाहन्छु। अंगालो
नमस्ते मारी Carmen5, तपाइँ खनिज पानी को उपयोग गर्नु पर्छ। यो हामी बस्ने ठाउँमा निर्भर गर्दछ, पानीमा धेरै फरक कम्पोनेन्टहरू छन्, अधिक चूना सहित ठाउँहरू छन्, ... र त्यसले स्वाद र समयलाई राम्रोसँग सुरक्षित गर्दछ। शुभकामना।
हेलो इलेना, मैले कहिल्यै आइसक्रीम बनाउने कोसिस गरिनँ, सँवलो शर्बत। मसँग फ्रिजर यत्तिको पूर्ण छ, कि म कहिल्यै स्ट्रries्बेरी फ्रीज गर्ने सोच्दिनँ ... तर म पक्कै यस सप्ताहन्तमा गर्न कोशिस गर्नेछु! तपाईंलाई पहिले नै थाहा छ कि म तपाईंको ब्लगसँग खुशी छु, र तपाईंले प्रकाशित गर्नुभएको सबै चीजको ग्यारेन्टीको ग्यारेन्टी छ! धन्यवाद!
BLANCA लाई जवाफ दिनुहोस्
धेरै धेरै धन्यवाद, ब्लांका! तपाईलाई हाम्रो ब्लग मन परेकोमा म धेरै खुसी छु।
नमस्कार, तपाईलाई कस्तो छ? म तपाईंलाई सोध्न चाहन्छु कि हामीले चाहेको तापक्रम हामीसँग किन छ किनकि थर्मो २१ ले त्यसो गर्दैन र अर्को प्रश्न उल्टो चिनीको साथ बेचिन्छ।
नमस्कार स्यान्ड्रा, तपाईंले उल्टो चिनी बनाउनुपर्नेछ, मैले लिंकलाई नुस्खाको साथ राखें। http://www.thermorecetas.com/2010/09/27/Receta-Facil-Thermomix-Azucar-invertido-para-helados,-bizcochos,-… /
मसँग 31१ छ र तापक्रम बत्तीरहेको छ, सत्य यो हो कि मसँग २१ छैन। मलाई माफ गर्नुहोस् म तिमीलाई सहयोग गर्न सक्दिन। शुभकामना।
नमस्कार मित्रहरु, म तपाईंलाई आफ्नो व्यंजनहरु मा बधाई छ, तिनीहरू धेरै सहयोगी छन्। आज मैले तपाईंको स्ट्रबेरी आइसक्रीम बनाएँ, मसँग क्रीम १/२ घण्टा फ्रीजरमा थियो। मैले उल्टो चिनी पनि बनाएको छु, तर जब म यसलाई भेला गर्दछु, क्रीम उठ्दैन, यो सजिलो छ। मैले के गल्ती गरेको छु? तपाईंको सुझावको लागि धन्यवाद। Alicante बाट अभिवादन।
डलरलाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते डोलोर्स, यो अर्ध-माउन्ट हुनु पर्छ। यदि हामीले यसलाई तुरुन्तै लियौं भने, यो आधा जमेको क्रीम जस्तै हो। यो तरल हुनु हुँदैन। हुनसक्छ उहाँलाई चाबुक बनाउन केहि थप समय चाहिएको थियो। अभिवादन र हामीलाई हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यबाद।
नमस्ते केटीहरू, यही नै आइसक्रिम अन्य फलहरूसँगै बनाउन सकिन्छ, उदाहरणका लागि, केरा फ्रिज गरेर? यो राम्रो देखिन्छ। धन्यबाद
नमस्ते मारिसोल, मलाई त्यस्तै लाग्छ, तर मैले अहिलेसम्म प्रयास गरेको छैन। सत्य यो हो कि मैले कहिल्यै केरा स्थिर गरेको छैन। शुभकामना।
तपाईंले कहिले फलफूल फ्रिज गर्ने कोसिस गर्नुभयो? हिजो मैले स्ट्रबेरीको साथ एउटा गरें र यो सामान्य भन्दा बाहिर!
नमस्ते मारी, म शर्बेट बनाउनको लागि ट्याger्गरिनहरू स्थिर गर्दछु। मलाई खुशी छ कि तपाईले यो मनपराउनु भयो। शुभकामना।
के यो अनफ्रोजन स्ट्रबेरीसँग समान हुनेछ? धन्यबाद
नमस्ते मारी, फ्रिज नगरिएको स्ट्रबेरीको साथ तपाईंले यस क्षणमा लिन सक्नुहुन्न। यदि तपाईं यसलाई स्थिर गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने, उनीहरू यसको लायक हुन्छन्। शुभकामना।
फेरि म मेरो पाहुनाहरुलाई चकित पार्न तपाईंको अद्भुत व्यंजनहरु को अर्को कोशिस गर्न जाँदैछु, यस अवस्थामा मेरो बुबा जसले स्ट्रबेरी मन पराउनुहुन्छ र मलाई शंका छ ...
के क्रीम (जुन तपाईं कल्पना गर्दै हुनुहुन्छ कि 35 XNUMX% फ्याटको हो) सीधा कार्डबोर्डबाट सम्मिलित हुनुपर्दछ वा यसलाई पहिले जम्मा गर्नुपर्दछ?
धेरै धेरै धन्यबाद!
नमस्कार एरिका, तपाईंले यसलाई इन्टबाट सीधै सम्मिलित गर्नुपर्दछ, आरोह नगरी। तपाईलाई हाम्रो ब्लग मन परेकोमा म धेरै खुसी छु! शुभकामना।
यो त्यस्तो होइन कि मलाई तपाईंको ब्लग मनपर्‍यो, मलाई यो मनपर्‍यो!
प्रत्येक दिन, बढाइचढाइ बिना, म तपाईले प्रकाशित गरेको केहि गर्छु।
मैले दुई दिन बितें कि इन्टरनेटले मेरो लागि काम गरेन र मैले खराब समय बिताएँ, तपाईका व्यंजनहरू बीचमा छनौट गर्न म असक्षम भएँ, मैले पुस्तकहरू मिलाउनु पर्‍यो ... तपाईं महान हुनुहुन्छ, तपाईं स्वादिष्ट व्यंजनहरू दिनुहुन्छ, युक्तिहरू, तपाईं व्याख्या गर्नुहोस् जब प्रत्येक चीज खानुहुन्छ, तपाई नुस्खाको फोटोहरू प्रकाशन गर्नुहुन्छ, तपाईं हाम्रो प्रश्नहरूको जवाफ चाँडै दिनुहुन्छ ... म सँधै विश्वासी अनुयायी हुँ।
र यदि तपाईं मलाई रचनात्मक आलोचनाको लागि अनुमति दिनुहुन्छ भने, हराइरहेको एउटा मात्र कुरा के हो भने धेरै व्यंजनहरूमा यसले कति डिनरहरूको लागि भनेको छैन ...
मेरो मुटु बाट, धन्यवाद र बधाई!
धेरै धेरै धन्यबाद, एरिका! तपाईलाई हाम्रो ब्लग मन परेकोमा म धेरै खुसी छु। तपाईं डाइनरहरूको बारेमा सही हुनुहुन्छ, विशेष गरी पहिलो व्यंजनहरूमा जुन हामीले यसलाई राख्दैनौं। अब हामी यसलाई राख्न कोसिस गर्छौं कहिलेकाँही यसले हामीलाई पास गर्दछ। शुभकामना।
xisca मारिया भन्यो
नमस्कार, नमस्कार ... .. तपाईंले प्राकृतिक डोनोनको साथ स्ट्रबेरी आइसक्रीम कोशिस गर्नुभयो? त्यो धेरै धनी छ।
Xisca maria लाई जवाफ दिनुहोस्
म यसको प्रयास गर्छु, Xisca María। धन्यवाद!।
नमस्कार फेरि, तपाईंसँग पहिले नै चकलेट आइसक्रीमको लागि विधि छ?
बेतलेहेमलाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते बेथलेहेम, मैले यो अहिलेसम्म गरेको छैन। सत्य यो हो कि हालसालै मसँग थोरै समय छ। शुभकामना।
यो केराले बनेको हुन्छ।
नमस्ते पिलर, मैले कोशिश गरेको छैन तर पक्का स्वादिष्ट नै छ। तपाई मलाई कस्तो हुनुहुन्छ, पिलर। शुभकामना।
आज यहाँ वरिपरि तातो लहर, क्यानरी टापुहरू। हामी º०º भन्दा बढि छौं र हामीले के पियौं? हाम्रो बगैचाबाट एक स्वादिष्ट स्ट्रबेरी आइसक्रीम तपाईंको नुस्खाको लागि धन्यवाद, म तपाईंलाई पनि भन्दिन ... अभिवादन
इसाबेल लुइस भन्यो
केटिहरु, म पनि यसलाई जामुनको साथ बनाईन्छु, र यो राम्रो देखिन्छ। यदि मसँग घरमा क्रीम कहिले पनि अभाव छ भने, म यसलाई दहीको साथ गर्छु र यो त्यति नै धनी छ। मलाई तपाईंको रेसिपीहरू मनपर्दछ, हिजो मैले स्याउबाट मीटलोफ बनाएँ, तर मसँग कुखुराको मासु नभएको कारण मैले सुँगुरको मासुको फाइदा उठाई ह्यामबर्गर बनाएँ र महान पनि। शुभकामना।
इसाबेल लुइसलाई जवाफ दिनुहोस्
इसाबेल, तपाईंको टिप्पणीको लागि धन्यबाद।
खैर, म दहीको साथ आइसक्रिम बनाउन कोसिस गर्दछु, यो पक्कै पनि धनी र हल्का हुनेछ।
जड चिनी के हो
Maku.ro लाई जवाफ दिनुहोस्
यहाँ उल्टो चिनी को लागि नुसार हो: http://www.thermorecetas.com/2010/09/27/receta-facil-thermomix-azucar-invertido-para-helados-bizcochos/
यो तरल चिनी हो, जुन आइसक्रीम तयार गर्दा धेरै उपयोगी हुन्छ, उदाहरणका लागि, किनभने यो जब क्रिस्टलीकरण हुँदैन र मिश्रित पदार्थलाई धेरै धनी बनावट दिन्छ। तपाइँ हामीलाई भन्नुहोस् यो कस्तो छ। 🙂
स्ट्रुबेरीहरू टुक्राहरूमा र अर्ध-स्थिर, जुन मैले समग्रमा फ्याँकें किनभने नुस्खाले निर्दिष्ट गर्दैन ... र मैले लगभग मेसिन लोड गरें!
नमस्कार गेमा, यद्यपि मेशिनले यसलाई हेन्डल गर्न सक्दछ र अधिक, यदि हामीले ती टुक्राहरूमा राख्यौं भने, सत्य यो हो कि हामी तपाईंलाई क्रसिंगमा मद्दत गर्दछौं, त्यसैले तपाईंको टिप्पणीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले भर्खर यसलाई नुस्खामा परिमार्जन गरेका छौं। काटिएको हुनाले, तिनीहरूलाई मा कुनै पनि Defrost आवश्यकता बिना थप्न सकिन्छ। हामीलाई पछ्याउनु भएकोमा धन्यवाद !! 🙂
बोनिटो एक ला Riojana
प्रोवेन्सल जडिबुटीको साथ गाला